XOG: Wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka Af-Urur & Puntland oo diyaar garow ku jirta. – Puntlandtimes
XOG: Wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka Af-Urur & Puntland oo diyaar garow ku jirta.
CARMO(P-TIMES)- Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalamayaal katirsan Al- Shabaab oo maalin ka hor la wareegay deegaanka Af Urur ee gobalka Sanaag, ka dib markii ay halkaas ciidamadii Puntland ee kusugnaa ka guureen, una baxeen dhinaca laamiga dheer ee kasoo baxa magaalada Boosaso.
Hadan Rayigeyga ka hadlo mashaqada ka Alosan Tulada af’urur oo katirsan buraleyda galgala ee gobalka Barri ee puntland,cidamada meshas saldhiga kulaha oo iskaga baxay saldhiga iyagoo aan Dagalamin oo iskaga baxay meshi arintasi ma’ah mid sahlan,cidamada waxay leyihin Difac & sirdoon ama gurmad kaga iman kara melkasta oo ugu dhawo,waxa surta gala in is fagarad qarsodi ah kala dhexeyo kuwa mesha qabsaday & kuwa mesha kunool dhamantod in talabo laga qado aya sharciga cidamada wa sidas waxay u’eggyihin cidan shaqadodi lumiyey.
waxay u egtahay sidaas aad sheegtay xaqiiq.
Meesha waxaan filayaa in warsan galigiii kasoo cararay Badhan inay isku laba rogeen AF URUR maxaa yeelay waa dhul warsangali.
Habar Harti Salaan.
Markaa Af urur waxaa haysta qabsaday somaliland, waa si wanaagsan. Berito wax kale ha ku hadlina….
Puntland waan ka xumahay waa isku dhex yaacsantahay meel ayagaa is fiirsanaya meel kale Dawlada Federaalka ayaa jecel inay burburto meelkale Isaaq baa doonaya in ay Puntland baabado, meelkale Maamulku wuxuu mooda meesha inuu u yimi dhar lagu xaraagoodo in la qaato ee aqoon dowladeed iyo horumarinta dhaqan dhaqaal iyo bulsho in laga rabo ma oga. Reer Hebel iyo reer Hebel bay ku mashquulsanyihiin Kii aqoonta lahaa qabiilkaa reebay
Allow na samata bixi
Warqabe salaamullah wallkiis
Insha Allahu reer Puntland waa geesiyo cadow badan leh lkn Allah baa lajira oo wax cadow ka qaadayaaba iska yar
Guuuuuul Inasha Allah
Ciidamada puntlaan ee si ku meel gaar ah uga soo durkay saldhigii ay joogeen waa xeel dagaal oo waxay Rabeen in ay ogaadaan jahada ugu dhaw ee shabaab ka imaanayaan. Markii ay taas ogaadeena waa kuwii haddiiba ku noqday saldhigoodii oo ay haddeer xaadir ku yahiin.Sheekooyinkale ee sheegaya waxaan waxba ka jirin waa wada been iyo bilaash